ကျွန်မလည်းအလှပြင်သည် (၂) ~ စန္ဒကူး
မျက်နှာတခါပြင်ရင် အချိန်တော့ ပေးရမှာပဲနော်၊
မမကျားကလူသာမလှတာ အလှအပတော. စိတ်ဝင်စားသလို အစားအသောက်လည်းမက်ပါတယ် ညီမလေးအသုံးပြုတာတွေကို မှတ်သားသွားပါတယ်နော် ကျေးဇူးပါ။
အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီး နေသင့်တာတော့ အမှန်အကန်ပဲ ကူးကူးရေး) လှဘို့ထက် သပ်ရပ်ဘို့က အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်တယ်လို့ တီတင့်တော့ ယူဆတယ်။ ကူကူးအသက်ငယ်ပါသေးတယ် စုံစုံလင်လင် ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ အာနိသင်လေးတွေကို လေ့လာသွားတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် ကူးရေ လမင်းလည်း အလှဘက်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ် အသက်လေးရလာတော့..
အပြုံးပန်းလေးရေ.. မျက်နှာပြင်တာ ၃ မိနစ်ဘဲ.. ကူးအိပ်ရာထနောက်ကျ လေ့ရှိလို့ ရုံးအမှီသွားဖို့ အချိန်က နဲနဲဘဲရတယ်..
moisturizer လိမ်း၊ မိတ်ကပ်ရည်လေးလိမ်း၊ blush on နဲ့ မျက်ခုံးမွေးဆွဲ.. လိုင်နာဆွဲပီး မြန်မှမြန်..း)))
မမကျားရေ.. ကျေးဇူးပါ... မလှတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမရှိပါဘူးနော်... အားလုံး သူ့အလှနဲ့သူရှိကြတာပါ.. မြင်တတ်တဲ့သူတွေမှတွေ့တာ..း))
တီတင့်ရေ.. မှန်တယ်... လှပသပ်ရပ်တာလဲ ဂုဏ်တစ်မျိုးဘဲ.. ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် confident ပိုရှိစေတာပေါ့နော်။ တီတင့်က အမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနေတတ်တာ ကူးသတိထားမိတယ်။ ကူးသာ အိမ်ရှင်မ တာဝန်ယူနေရတဲ့သူဆို စုတ်ဖွားလေး ဖြစ်နေမှာသေချာတယ်။
ချစ်စံအိမ်... ဟုတ်ပါ့နော်..အသက်လေးရလာတော့..း))))
စုံစိနေတာပဲ... ကိုယ်တိုင်က အလှမပြင်တတ်ပေမယ့် အဲလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်ထားတတ်တဲ့သူကို သဘောကျတယ်... ပြင်ဆင်စရာ ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း သဘောကျတယ်...း-)
ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာလေး။ ကျေးဇူးပါပဲ ညီမလေး။ တခုတော့ သိချင်တယ် ။ ညီမလေး skin type က ဘယ်လို type လဲ။ အစ်မက oily and combination skin type လေ။ type ချင်းတူ၇င် ညီမလေး သုံးတဲ့ထဲ ကတချို့ ဟာလေးတွေစမ်းသုံးကြည့်ချင်တာ။ blusher က body shop ကထုတ်တာလဲ သုံးလို့ ကောင်းတယ်... ။
sis do u know where can we buy jericho deadsea salt and other jericho product in singapore? thx
အ မ ရေ jericho deadsea salt ကို ဘယ် မှာ ဝယ် လို့ ရ လဲ
မိုးနတ်က အလှအပကို သိပ်စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲလှလှပပလေး
နေတတ်တော့ အမရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်
သိလားးးးးးးးးးး မျှဝေပေးတာလဲ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် :)))
မမသက်ဝေ... အလှပဆိုစိတ်ဝင်စားတာဘဲ..ကူးလဲအရင်ကမပြင်တတ်..အခုတော့ ပန်းချီချယ်ရတာသဘောကျနေပီ..
ညီမလေးဆုမြတ်မိုးနဲ့ Sandi ရေ.. http://www.jericho-skincare.com/jerichoskincaresingapore.html မှာ မှာလို့ရတယ်...amazon ကမှာလဲရတယ်.. http://www.jerichoskincare.com/
မမမိုးရေ.. ကူး skin type က နေတဲ့နေရာမှာမူတည်တယ်.. ရန်ကုန်မှာဆို သာမန်ဘဲ..အဆီနဲနဲပြန်တယ်... အေးတဲ့နေရာမှာတော့ ခြောက်တယ်... ရာသီဥတုနဲ့ဆိုင်တယ်...
မိုးနတ်ညီမလေးရေ.. ကျေးဇူးပါ... အမလဲသုံးဖြစ်တဲ့အထဲက အကောင်းဆုံးတွေရွေးပီး တင်ထားပေးတာပါ။
ဟုတ်ပါ့ဥဥ ရေ... အသက်လေးလဲရလာပီဆိုတော့.. :P
ဟိုး အပေါ်က မချောတွေရေ
Serangoon NEX မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်တဲ့။ ဈေးဆစ်ရမယ်နဲ့တူတယ်။ စလုံး ၇၀ လောက်ကနေ စပြောတာ ၅၀ အထိ လျော့ ပေးတယ်တဲ့။ အဖြူမ ရောင်းတာနဲ့တူတယ်။
ကူးကူး ဟင်းချက်တာ ပို သဘောကျတယ်။ တောဟင်းလေးတွေ ချက်ပါ။
အဲလိုလေး လှချင်လိုက်တာ ကူးကူးရယ်၊ သေချာ မပြင်တတ်ဘူးး) စိတ်မရှည်တား)
အလှမပြင်တတ်တဲ့သူတောင် ပြင်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ် သိလား...ခဏခဏ လာလည်ဖြစ်တယ်နော် ကွန်မန့်သာ သိပ်မရေးဖြစ်တာပါ...
ဘာ ဖောင့်နဲ့ရေးတာလဲဟင်... ပိုစ့်ထဲကဖောင့်က မမြင်ရဘူး... ကျန်တဲ့နေရာက ဖောင့်တွေ အကုန်မြင်ရတယ်... ဘာလို့လဲ သိလား...
ကူး ဖောင့်က ဇော်ဂျီလေ... အခြားသူတွေကမြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်..
ကူးကူးလှိုင်... စွဲဆောင်နေတာ.. အလှပြင်အောင်လို့.. ဟီး
မမချစ်ကြည်.. က အလှမပြင်လဲလှပီးသားပါနော်..
ကူးကူးရေ စာရေးတာကျဲတယ်နော် ဒီနောက်ပိုင်း နေကောင်းရဲ့လား
ကူးကူးဆီက အလှပြင်နည်း တွေ အစ်မ မှတ်သွားတယ်နော်
ကူးအလုပ်ရှုပ်နေတာရော..အားတဲ့အချိန်လေးလဲ နားချင်တာနဲ့ ဘာမှသိပ်မရေးဖြစ်ဘူး..
collagen moistfull ကအဆီပြန်တဲ့မျက်နှာရောအဆင်ပြေလား ဟင်။မလေးမှာကမိုးရွာပေမဲ့ပူတယ်။နေ့တိုင်းမျက်နှာပြောင်နဲ့အလုပ်သွားနေရတာskincare တခုခုသုံးချင်နေတာ။ဈေးကြီးပေးပြီးအ ဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။
anonymous... ညီမရေ..ဆိုင်မှာအရင်စမ်းကြည့်နော်.. ပီးရင် mall တစ်ပတ် ပတ်လိုက်.. ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ၀ယ်လို့ရပီ..
ကူးကူးက အဲဒီ collagen moistfull ကို အောက်က moisturizer ခံပီးမှ ထပ်လိမ်းတာ.. အဆီပြန်တဲ့မျက်နှာလဲအဆင်ပြေမှာပါ...
မျက်နှာပြောင်နဲ့နေတတ်တယ် ဆိုရင်တော့ L'Oreal day cream လေးဘဲ လိမ်းထားပါ.. သူက အဆီပြန်လာလဲမျက်နှာစိုစိုလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်..
collagen moistfull ကဈေးတော့မကြီးဘူး..အထူးသဖြင့်မျက်နှာပေါ်လိမ်းမယ့် cream ကို အရင်စမ်းကြည့်ပီးမှဝယ်ပါနော်။ မဟုတ်ရင်ပိုက်ဆံကုန်ပီး အသုံးမ၀င်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
kyay zuu par..kuu kuu...sate win sar sayar kg tal